Akụkọ - Genius na - ejikọ Shimano Di2 na SRAM hydraulic components
Genius na-ejikọ Shimano Di2 na SRAM hydraulic
Kedu ihe ị na-eme mgbe ụlọ ọrụ igwe anaghị enwe ike imepụta akụkụ ga-egbo mkpa gị? Ọ bụrụ na ị bụ onye injinịa na pneumatic ọkachamara Paul Townsend, ị ga-emepụta ngwaahịa gị ma zuo ohi akụkụ site na ụdị asọmpi.
Paul kwuru banyere ọrụ nke teknụzụ okporo ụzọ nwụrụ anwụ (ya na braịkụl rim brek) ya na foto pụrụ iche nke SRAM-Shimano hacker, anyị ga-amụtakwu.
Dịka mbido afọ 2016, ahịa otu ụzọ dị ezigbo iche na ugbu a. Shimano amalitebeghị Dura-Ace R9170 diski na Di2 ngwakọta ngwakọta (ihe na-abụghị usoro R875 joysticks na brakes kwekọrọ bụ naanị nhọrọ hydraulic / Di2), na SRAM's Red eTap HRD ka ọnwa gafere.
Paul chọrọ iji hydraulic rim brek n'okporo ụzọ ya, ma ọ bụghị afọ ojuju na Magura breeki calipers.
Ihe nkwụnye ego SRAM nwere breeki hydrim nwere ọtụtụ ego. Ọ bụ onye na-akwado Shimano Di2 gearbox, n'ihi ya, o kpebiri ikpokọta ha abụọ n'ime ihe ngosi DIY pụrụ iche.
Nke a na-agụnye ịkwaga mpempe akwụkwọ breeki na mgbanaka bọtịnụ na ngwa eletriki metụtara site na set nke ọ joụ Di2 na SRAM hydraulic road joystick body.
Usoro hydraulic nke SRAM ka na-agbanweghi agbanwe, mana ọ na-arụ ọrụ site na Shimano lever blades, na ngbanwe gia dabere na Di2.
Ajụrụ m Paul ụfọdụ ajụjụ iji mụtakwuo banyere nhazi ya pụrụ iche: otu o si arụ ọrụ, usoro injinia ya, na ihe na-esote. Edeziwo azịza Pọl maka ogologo na nghọta doro anya.
Tupu ịga n’ihu, anyị kwesịrị igosi na ịgbanwe usoro braki gị n’ụzọ ọ bụla nwere ike ibute nnukwu mmerụ ahụ, anyị anaghị atụ aro ka ịme nke a. Mgbanwe ndị akụrụngwa na-eme ka akwụkwọ ikike nke onye nrụpụta ghara ịdị irè.
Kemgbe afọ ndị 1980, anọ m na-agba ịnyịnya ígwè mgbe m na-amụ nkà mmụta nkà na ụzụ na Mahadum Coventry Poly. N'oge ahụ enwere m Topanga Sidewinder na Mick Ives igwe kwụ otu ebe.
Arụrụ m ọrụ n'ichepụta ịnyịnya ígwè na nhazi omenala, ma bụrụkwa onye injinịa na ọkachamara pneumatic ruo ogologo oge. M gbanwewokwa ụgbọala na ịnyịnya ígwè ruo ọtụtụ afọ.
Enwere m Canyon Ultimate na 2013 ma nwee mmasị na teknụzụ, yabụ na mbụ m ji ya dozie Shimano Ultegra 6770 Di2.
Mgbe ahụ, m kwalitere na brek ma nwalee Magura RT6 hydraulic rim brek. N'ikwu eziokwu, ọ na-eweta nsogbu, ma na-eweta nsogbu wụnye na ịwụnye.
Emeela m ipigide derailleur maka ọgba tum tum m na-apụ ma tinye usoro Formula RR clone diski ya na Di2 na-agbanwe. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, mana oge a, ọnụahịa SRAM HydroR hydraulic rim brek na levers na Planet-X dị obere dị nzuzu.
Mgbe m gụchara etu ihe SRAM siri jikọta ọnụ ma mata ohere achọrọ maka modulu Di2, azụrụ m breeki HydroR maka £ 100. Emechara, azụrụ m ọzọ set anọ maka m, onye ibe na otu onye na United States.
N’oge gara aga, emekwara m wiil na Gravity Research Pipe Nrọ-ụdị V brek m n’okporo ụzọ, ma mezie igwe maka igwe ndị ọzọ.
Ya mere, echiche anyị bụ: hydraulic diski brek nwere mmetụ bara ụba na ntakịrị ihe enyemaka. Maguras na-egbu mgbu ma na-eme ihere, yabụ ọ bụrụ na achọrọ m ịkwado igwe kwụ otu ebe n'okporo ụzọ na hydraulic rim brek, enwere m ike ịhọrọ SRAM, mana Di2 na-amasị m.
Kedu otu o siri sie ike ijikọta abụọ ahụ? Mgbe mwepụsịrị usoro mgbanwe ọsọ, enwere nnukwu oghere na ahụ SRAM rod rod, yabụ azịza ya bụ: ọ dị mfe.
M zụtara ụfọdụ n'aka-6770 Di2 gia levers. Ebe ọ bụ na 11-ọsọ Ultegra 6870 Di2 bụ ngwaahịa ọhụrụ, ọtụtụ ndị jiri ihie ụzọ ree 6770 gia lever iji kwalite [njehie n'ihi na 6770 nwere ike iji ya na 6870 derailleur]. Echere m na azụrụ m ụzọ ụzọ abụọ maka £ 50.
Ntọala m na-eji oghere dị ugbu a na Mgbapụta breeki Di2, ma na-eme ka ngwangwa ngwa ngwa nke ọla na plastik (3D e biri ebi) akụkụ nke mbido mgbaji Di2 mbụ banye na cylinder nna ukwu breeki, yabụ ike nrụpụta agaghị adị oke elu. otu ajụjụ.
M bepụsịrị akụkụ gafere site na mkpịsị aka 6770 Di2 ahụ, were ya rụọ ya nke ọma, ma werezie ya n'akụkụ akụkụ naịlọn nke a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ.
M reamed oghere na-eme ka oghere ezigbo na nri size. Iji obere agba, ma ọ bụ Shimano isi awọ-akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ntu na nke a, adị m njikere ịkpọkọta ihe niile.
Ndokwa a anaghị eji nkwụghachi nkwụghachi ma ọ bụ E-clip dozie ogwe osisi ahụ, yabụ, a gbapuru oghere ahụ wee pịa ya iji nweta ihe ga - eme ka isi ghara ibu ya. Ozugbo ozu ahụ na-ehi ụra ntakịrị, isi na-ewepu.
A na-agbakwunye mmiri mgbapụta na-arụ ọrụ na breeki isi cylinder iji nye ikike nkwụghachi maka lever.
Mgbe nke ahụ gasịrị, naanị mgbanwe m mere bụ ịgbakwunye obere mgbanaka O-mgbanaka na ochie E-mwepu uzo nke pivot pin iji gbochie breeki lever pays ka ọ ghara ịda ntakịrị.
Di2 USB na-agbatị na uzo dị n'akụkụ ala nke isi 3D nke biri ebi nke breeki breeki, yabụ edoziri ya ma ọ gaghị arapara ma ọ bụ eyi ya.
Mgbe mwepụsịrị usoro ntụgharị niile, naanị otu ụzọ isi gbanwee akụkụ SRAM bụ ịdebanye oghere iji dọọ eriri Di2. A na-edozi Di2 modul na mpempe ụfụfụ na oghere dị n'azụ.
Agbakwara m sistemụ mgbapụ agbawara agbawa, na-ejikọ mgbanaka Dura-Ace 7970 Di2 ochie site na ntụgharị SW-R600 na-arịgo na sistemụ eletrọniki, na njikọ niile ejiri njikọ aka ekpe. Eriri agbatị ahụ iji nye ihe nkwụnye nkwụnye dị mma, na mgbe m na-agba ọsọ na Canyon mmepụta oyiri Integrated menjuobi njikwa, igbe Junction'A'Di2 dị na aro dị na ya.
Mkpuchi ahụ nwere akwa titanium na brads pad brackets. A na-etinye ha na etiti 52 cm. Mkpokọta nke ụkwụ ụkwụ dị n’ihu bụ 375g, ngụkọta nke ụkwụ azụ ahụ bụ 390g, na ngụkọta ibu nke ụkwụ azụ ahụ bụ 390g.
Ee, achọrọ m ịsị na ọ bụ ihe ịga nke ọma. Erere m otu mmadụ setịpụrụ na Hong Kong, bụ onye zigakwara m SRAM Red na Dura-Ace iji mee igwe a.
Erere m otu onye ọzọ akụrụngwa ọzọ dị na Australia ka o jiri igwe eletrik ya TT, ma resị onye America otu ụzọ n'ụzọ atọ ka m wee nwee ike ịkwụ ụgwọ niile m mefuru.
Ọ bụrụ na m kwụọ ụgwọ zuru ezu maka ihe a niile, ọ ga-abụ ihe ize ndụ ka ukwuu. Ọzọkwa, enwere m ike weghachite akụkụ SRAM mgbe niile ka ọ nwee ike ịmịnye usoro na enweghị nsogbu ọ bụla.
Eleghi anya m ga-enye onye na-ejide ya ihe nloghachi siri ike. Achọrọ m mkpọchi eri iji kwụsị mgbanwe dị iche iche nke njem n'oge ịkwọ ụgbọala, n'ihi na agbapụrụla m ihe mgbochi breeki ahụ kpamkpam wee wepụ eriri mkpọchi mbụ ahụ.
Ee, m na-etolite elu ugwu ọhụrụ na ihe ndị na-agba ọsọ, m na-achọkwa nhazi dị iche iche nke ihe nkedo n'ihu ga-abụ onye inyeaka inyeaka, dị ka mkpịsị aka mkpịsị aka na Campagnolo griver.
Echiche mbụ bụ nkwụnye aka nri na aka ekpe aka nri, m ka na-agbalịkwa iji nke agụba mma.
Enwere m ike ịrapara na mbadamba ihe mgbochi SRAM dị larịị ma ọ bụ jiri Campagnolo, wee debe mpempe akwụkwọ SRAM maka azụ derailleur gearbox na ihe ọhụụ ọhụrụ maka gearbox derailleur n'ihu.
Nke a kwesịrị ịpụta na enweghị ndenye ọ bụla ọbụlagodi mgbe ị na-eyi uwe aka, nke nwere ike ịbụ nsogbu n'oge oyi n'okpuru ntọala ọkọlọtọ Shimano.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ịza ajụjụ m na ịnye gị onyogho. Maka ndụmọdụ ndị ọzọ gbasara ya, biko soro ya na Flickr na Instagram, ma ọ bụ gụọ posts ya n'okpuru aha motorapido na Weight Weenies forum.
Matthew Allen (nke a na-akpọbu Allen) bụ aka ochie n’ịkpụzi ụgbọ elu na aka ochie n’ịzụ igwe. Ọ na-enwe ekele maka imepụta ihe bara uru ma dị egwu. Na mbụ na Louis, ọ na-enwe mmasị ịnyịnya ígwè na ngwa ọrụ ọ bụla. Kemgbe ọtụtụ afọ, ọ nwalela ngwaahịa dị iche iche maka BikeRadar, Cycling Plus, wdg ruo ogologo oge, obi Matthew bụ nke Scott Addict, mana ọ na-anụ ụtọ Ọpụrụiche ọkachamara ọkachamara nke Roubaix ma nwee mmekọrịta chiri anya na Giant Trance e-MTB. Ọ bụ 174 cm ogologo ma tụọ 53 n'arọ. Ọ dị ka ọ ga-aka mma karịa ịgba ịnyịnya ígwè, afọ ju ya.
Site na itinye nkọwa gị, ị kwenyere na usoro na ọnọdụ nzuzo nke BikeRadar. Nwere ike wepu aha na oge ọ bụla.